Hawlaha horyaal Mullah Mansuur - BBC News Somali
Hawlaha horyaal Mullah Mansuur
Talibanka Afghanistan ayaa sheegaya inay meel iska dhigeen khilaafaadka, ayna kuu mideysan yihiin hoggaamiyahooda cusub Mullah Akhtar Mohammad Mansuur.
Hadalkaasi ayaa kadambeeyay todobaadyo dadaalo darran oo lagu mideynayay dhaqdhaqaaqa ka dambeeya ninka qabtay hoggaanka Taliban.
Kaddib markii la shaaciyay dhimashada Mullah Cumar ee bishii July, ayaa dhaqso loo magacaabay hoggaamiyaha cusub ee Amiirul Muuminiinta. Go'aankaasi oo horay ay u soo jeediyeen taageerayaasha Mullah Cumar.
Mullah Cumar walaalkii iyo wiilkiisa ugu weyn ayaa ugu muhiimsanaa kuwa la tartamayay amiirka cusub oo ilaa iyo haatan la ogeyn, kuwaasi oo su'aalo ka keenay sida loo magacaabay, waxayna labaduba ballanqaadeen inay daacad u yihiin Mullah Mansuur.
Todobaadyadii dhawaa ayey boqolaal taliyayaasha Taliban iyo dagaalyahannada ay horay iyo gadaal ugu safarayeen Pakistan, si ay wax uga qabtaan qeybsanaanta.
Howsha mideynta ururka ayaa u muuqata mid aan weli dhameystirneyn, iyadoo qaar ka mid ah kuwa sar sare ay weli ku hanjabayaan inaysan u hoggaansameynin Mansuur, ayna goonigooda u shaqeynayaan.
Dadaalka looga guuleysanayay waxyaabaha Mullah Mansuur hoggaamintiisa ka horyimid ayaa muujinaya, sida ay u muhiim ugu tahay ururka inuu mideysnaado.
Waheed Mozhda oo ah khabiir deggan Kabul, oo horay uga shaqeeyay wasaaradda arrimaha dibadda ee Taliban ka hor intaan awoodda laga ridin sanadkii 2001-kii, ayaa sheegay in kooxda ay xaqiiqsatay in midnimo oo kaliya ay ku badbaadi karaan.
"Cadowgoodu waa ka xoog badan yahay. Sidaa daraadeed, way ogyihiin hadii khilaaf ka dhex jiro in la xaaqi doono" ayuu yiri Mr Mozhda.
Barnett Rubin oo Mareykan ah, kuna ah khabiir arrimaha Afghanistan ayaa sheegaya in Taliban ay isugu xirnaanyeen fakar midnimo, taasi oo ilaa iyo hadda ka badbaadisay inay kala qeybsamaan.
Borhan Osman oo ka tirsan shabakad Afghanistan oo ka faalooto arrimahaas, ayaa sheegaya in guddiga militerigu uu ugu muhiimsan yahay shaqada kooxda. Wuxuuna madaxa guddigaasi u yahay sida wasiirka difaaca ee dowlad.
Taliban ayaa leh xafiis siyaasadeed oo dhinac socda kan dagaalka oo ku yaala Qatar, oo loo dhisay xiriirka ururka si u u fududeeyo wadahadalada nabadda.
Waa kuma Mullah Mansuur.
Waxaa muddo loo arkayay kusimaha madaxa Taliban iyo gacanta midga ee Mullah Cumar. Wuxuuna ku dhashay 1960kii gobalka Kandahar, halkaasi uu ka soo noqday ninka u taagan guddoomiyaha kaddib burburkii Taliban, wuxuuna soo noqday wasiirka duulista markii Talibanku xukunka hayeen. Wuxuuna sidoo kale ahaa xubin firfircoon oo dhuumaaleysiisa daroogada sida Qaramada Midoobay laga soo xigtay.
iyadoo la aaminsan yahay in hoggaanku fadhiyo Paksitan ayey taliyayaasha iyo dagaalyahannada ku firdhisan yihiin meelo badan oo Afghanistan ah, waxayna isgaarsiintu u tahay midda ugu adag.
Tifaftiraha BBC qeybta afka Urduga ee Islamabad, Haroon Rashid, ayaa sheegaya in waxa ugu weyn ay yihiin sidii loo ilaalin lahaa warbixinada muhiimka ah. Habka ugu badbaadsan ayaa ah in afka laysugu gudbiyo, waxayna sidoo kale kuwada xiriirayeen waraaqo.
Sida Taliban Lacagta ku hesho
Taliban ayaa si caadi ah ugu tiirsanaa deeqaha ay ka helaan kuwa taageersan ee khaliijka, balse khubarada qaar ayaa sheegaya in gargaarka noocaas oo kale ah uu dhamaaday.
Meelaha kale ee lacagta ay ka helaan ayaa ah gudaha Afghanistan, waxaana la sheegayaa in qaar ka mid ah Taliban ay ganacsi ku leeyihiin dalalka Imaaraadka, Qatar iyo Sacuudiga